ch 11 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 11 လုကာ
11:1 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူဆုတောင်းနေတဲ့တချို့သောဌာန၌နေစဉ်, သူလွတ်ငြိမ်းသည်လာသောအခါ, တပညျ့တျောတစျခုဟုလြှောကျ, "သခင်, ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေး, ယောဟန်သည်လည်းပည့်တော်တို့ဆုံးမဩဝါဒပေးအဖြစ်။ "
11:2 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်ဆုတောငျးလကြသောအခါ, ပွောဆို: ခမညျးတျော, သင်တို့၏နာမအဘို့သန့်ရှင်းစေခြင်းငှါစောင့်ရကြမည်. သင်၏နိုင်ငံသည်လာနိုင်ပါစေ.
11:3 ဤနေ့ငါတို့သညျနေ့တိုငျးမုန့် Give.
11:4 ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်, ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးတင်လျက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုခှငျ့လှတျကတည်းက. ထိုမျှမကအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်။ "
11:5 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်ဘယ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မယ်နှင့်ညဉ့်အလယ်၌သွားရလိမ့်မည်, သူ့ကိုရန်ဟုဆိုလိမ့်မည်: '' မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း, သုံးမုန့်ငါးလုံး, ငါ့ကိုချေး,
11:6 သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအကြှနျုပျကိုမှခရီးကနေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ, နှင့်သူ့ရှေ့မှာငါထားရန်ဘာမှမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ''
11:7 နှင့်အတွင်းကနေ, သူဟုပြန်ပြော: '' ငါ့ကိုမနှောင့်ယှက်မနေပါနဲ့. တံခါးဝကာယခုပိတ်ထားသည်, ငါ့သားသမီးတို့သည်ငါ၌ရှိကြ၏အိပ်ရာ. ငါထရနှင့်သင်ဖို့ကမပေးနိုငျပါ။ ''
11:8 သို့သျောလညျးကိုယျတျော၌စှဲမွဲခေါက်လျှင်, ငါကသငျသညျပွောဆို, သူဖွင့်မရ, သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကြောင့်ထိုသို့မပေးမယ်လို့တောင်မှ, သို့သျောလညျးသူ့အဆက်လက်အခိုင်အမာမှုကြောင့်, သူတက်ရသူလိုအပျသမြှသသူ့ကိုငါပေးမည်.
11:9 ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ: မေးပါ, သည်သင်တို့အားပေးတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. ကိုရှာကြလော့, သငျတို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်. ခေါက်, သည်သင်တို့အားဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
11:10 တောင်းသောသူလူတိုင်းအတွက်, အားလက်ခံတွေ့ဆုံ. အကြင်သူသည်ရှာကြံ, တွေ့ရှိချက်. အကြင်သူသည်ခေါက်, ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
11:11 သို့ဖြစ်., သငျတို့တှငျအဘယ်သူသည်, သူသည်မုန့်သည်သူ၏ဖခင်ကမေးတယ်လျှင်, သူ့ကိုတစ်ကြောကျကိုပေးလိမ့်မယ်? သို့မဟုတ်သူတစ်ဦးသည်ငါးဘို့တောငျးလြှငျ, သူ့ကိုမြွေကိုပေးမည်, ငါးအစား?
11:12 သို့မဟုတ်သူကြက်ဥအဘို့အမေးလိမ့်မည်ဆိုပါက, သူ့ကိုမှကငျးမွီးကောမယ်လို့?
11:13 ထို့ကြောင့်, လျှင်သင်, မကောင်းသောအမှုဖြစ်ခြင်း, သင်၏သားတို့သည်ကောင်းသောအမှုအရာအားပေးဖို့ဘယ်လိုသိ, ဘယ်လောက်ထက်ပိုသောသင်တို့အဘအားငါပေးမည်, ကောင်းကင်ကနေ, သူ့ကိုမေးသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုခြင်းအများ၏ဝိညာဉျ?"
11:14 သူနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခဲ့သည်, နှင့်လူကိုစကားခဲ့တယ်. သို့သော်သူသည်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှ, အဆိုပါစကားအသောသူသည်စကားပွော, ဒါလူအစုအဝေးမိန်းမောတွေဝေ.
11:15 ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအချို့ကလည်း, "ဒါဟာ Beelzebub အားဖြင့်ဖြစ်တယ်, နတ်ဆိုးတို့၏ခေါင်းဆောင်, သူနတ်ဆိုးတို့ကိုထွက်ပျော်စေပါတယ်။ "
11:16 နှင့်အခြားသူများ, သူ့ကိုစမ်းသပ်, သူ့ကို၏ကောင်းကင်ကနေတစ်ဦးသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုမလိုအပ်.
11:17 ဒါပေမဲ့သူကသူတို့ရဲ့အကြံအစည်ရိပ်မိကြသောအခါ, သူတို့ပြောဆို: "ကိုယ်တိုင်ကဆန့်ကျင်ဝေဖန်လျက်နေကြသည်နေ့စဉ်နိုင်ငံတော်သည်လူဆိတ်ညံလျက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်, နှင့်အိမ်အမျိုးအပေါ်သို့ကျကြလိမ့်မည်ဟု.
11:18 သို့ဖြစ်., စာတန်သည်လည်းမိမိကိုမိမိဆန့်ကျင်ဝေဖန်လျက်နေကြသည်လျှင်, ဘယ်လောက်သူ၏နိုင်ငံကိုရပ်တည်ချက်လိမ့်မည်? ဘို့သင့်ကိုငါအမှီ ပြု. နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟု Beelzebub ဖွငျ့ဖွစျသညျဟုပြော.
11:19 သို့သော်လည်းငါသည် Beelzebub အားဖြင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျှင်, အဘယ်သူကိုဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်၏သားတို့ကိုနှငျထုတျပါဘူး? ထို့ကြောင့်, သူတို့သည်သင်၏တရားသူကြီးများကိုရကြလိမ့်မည်.
11:20 ထို့အပြင်, ငါနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သောဘုရားသခငျ၏လက်ညှိုးလျှင်, ထို့နောက်မုချဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့သင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီ.
11:21 ခိုင်ခံ့သောလက်နက်ကိုင်လူသည်မိမိဝင်ပေါက်ကိုစောင့်ရတဲ့အခါ, သူပိုင်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိဿဟာယမှာ.
11:22 သို့သော်လျှင်ပိုမိုအားကောင်းတယောက်ကို, သူ့ကိုမြား, သူ့ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီ, သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏လက်နက်များကိုပယ်ရှားလိမ့်မည်, သူကိုးစားသော, သူသည်မိမိဥစ္စာဖြန့်ဖြူးလိမ့်မည်.
11:23 သူမည်သည်ကားငါနှင့်အတူငါ့မဟုတ်ပါဘူး, အကြှနျုပျကိုဆန့်ကျင်. အကြင်သူသည်ငါနှင့်အတူငါ့မစုမသိမ်း, အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
11:24 မစင်ကြယ်သောဝိညာဉျတျောလူထဲကထွက်သွားလေ၏သောအခါ, သူလှငျသောအရပ်တို့၌လည်လမ်းလျှောက်, ကြွင်းသောအရာရှာကြံ. ထိုအဆိုမတှေ့, သူကပြောပါတယ်: '' ငါသည်ငါ၏အိမ်တော်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်, ငါထွက်သွားကြရာမှ။ ''
11:25 ထိုမင်းသည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အခါ, သူကစင်ကြယ်သောမျောတွေ့အလှဆင်.
11:26 ထိုအခါသူဝင်, သူကသူနှင့်အတူအခြားလူခုနစ်နံဝိညာဉ်အတွက်ကြာ, မိမိကိုမိမိထက်ပိုမိုသည်မတရားသောသူ, ထိုသူတို့မဝင်ရအဲဒီမှာကျရှငျနထေို. ဆိုတော့, သောလူသား၏အဆုံးအစအဦးပိုဆိုးဖန်ဆင်းတော်ရှိ၏။ "
11:27 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူသည်ဤအမှုအရာဟူမူကားခံရတဲ့အခါ, လူအစုအဝေးထဲကနေမိနျးမတယော, သူမ၏စကားသံကိုချီ, သူ့ကိုကပြောပါတယ်, "မင်္ဂလာသင်နှင့်သင်စို့သောရင်သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏သောအမိဝမ်းရှိ၏။ "
11:28 ထိုအခါသူကပြောသည်, "ဟုတ်တယ်, ဒါပေမယ့်ထိုမှတပါး: ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားကိုနားထောငျနှင့်စောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်ဖြစ်ကြ၏။ "
11:29 ထိုအခါ, လူအစုအဝေးလျင်မြန်စွာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်, သူပြောရစတင်ခဲ့: "ဒီမျိုးဆက်မှာမတရားသောမျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်: ဒါကြောင့်တစ်ဦးနိမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာ. သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှနိမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်, ပရောဖက်ယောန၏နိမိတ်လက္ခဏာမှတပါးအဘယ်ကို.
11:30 ယောနသည်နိနဝေမွေို့အားနိမိတ်လက္ခဏာခဲ့သကဲ့သို့များအတွက်, ထိုနည်းတူလူသားသည်ဤလူမြိုးအားဖွစျလိမျ့မညျ.
11:31 တောင်ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားထမည်, စီရင်တော်မူခြင်းမှာ, ဤလူမြိုးဆကျ၏လူတို့နှင့်အတူ, သူမကသူတို့ကိုတရားရှုံးစေမည်. သူမသည်ရှောလမုန်၏ပညာစကားကိုနားထောငျဖို့မြေကြီးစွန်းမှလာ. ထိုအခါ, ရှောလမုန်မင်းကဒီမှာထက်ပိုပြီး.
11:32 နိနေဝေမြို့သားတို့သည်ထမည်, စီရင်တော်မူခြင်းမှာ, ဤလူမြိုး, သူတို့ကတရားရှုံးစေမည်. ယောန၏ဟောပွောများအတွက်, သူတို့နောင်တရ. ထိုအခါ, ယောနသည်ကဒီမှာထက်ပိုပြီး.
11:33 အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနှင့်ပုန်းခိုထဲမှာနေရာ, မ bushel တောင်းကိုအောက်မှာ, သို့သော်မီးခုံပျေါ၌, ဝငျသောသူသညျအလငျးကိုမွငျစခွေငျးငှါဒါ.
11:34 သင်၏မျက်စိသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အလင်းဖြစ်၏. သင့်ရဲ့မျက်စိအကြိုးပွုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးအလင်းနှင့်ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်. သို့သော်မတရားသောအမှုဖြစ်၏လျှင်, ထို့နောက်ပင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်မိုက်လိမ့်မည်.
11:35 ထို့ကြောင့်, ဂရုစိုက်ပါ, သငျသညျမှောငျမိုကျဖြစ်လာအတွင်းကြောင်းကိုအလင်းကို စိုးရိမ်..
11:36 သို့ဖြစ်., သင့်ရဲ့ခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးအလင်းနှင့်ပြည့်စုံလာသည်ဆိုပါက, မှောင်မိုက်၌မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိခြင်းမဟုတ်, ထို့နောက်သူကလုံးဝအလင်းဖွစျလိမျ့မညျ, နှင့်, တစ်ဦးထွန်းလင်းဆီမီးခွက်နဲ့တူ, သင်အလင်းလိမ့်မည်။ "
11:37 ထိုမင်းသည်စကားပြောခဲ့, တယောဖာရိရှဲသူ့ကိုနှင့်အတူစားခြင်းငှါသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်. နှင့်အတွင်းအပြင်တာပေါ့, သူအစာစားခြင်းငှါထိုင်.
11:38 ဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲဆင့်ဆိုရမည်မှာစတင်, ကိုယ်တော်တိုင်အတွင်းစဉ်းစား: "အဘယ်ကြောင့်သူသည်စားမှီဆေးမမူကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,?"
11:39 ထိုအခါသခင်အားဆို၏: ဖလား, ပန်းကန်အပြင်ဘက်သောအရာကို "သင်ဖာရိရှဲတို့ကယနေ့စင်ကြယ်သော, ဒါပေမယ့်သင်သည်အဘယ်သို့၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လုယူသောဥစ္စာနှင့်မတရားသောနှင့်ပြည့်ဝ၏.
11:40 တွေ့ကြုံ! သူအပြင်ဘက်သည်အဘယ်အရာကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်သူကို, အကယ်စင်စစ်လည်းအတွင်းအပြင်သည်အဘယ်အရာကိုလုပ်?
11:41 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အထက်ဆွမ်းအဖြစ်သည်အဘယ်အရာပေးမည်, အကယ်စင်စစ်, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အဘို့အစင်ကြယ်.
11:42 သို့သော်မင်္ဂလာသင်ဖို့, ဖာရိရှဲတို့! သငျသညျပူရှိန်းနဲ့, rue ရှိသမျှဆယ်ဘို့တဘို့ပျိုးပင်များအတွက်, သင်မူကားအပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလျစ်လျူရှု. သို့သော်ဤအမှုအရာသငျသညျပွုပါပွီ်၏, တခြားသူတွေနျြမပါဘဲ.
11:43 သငျသညျမှမင်္ဂလာရှိ၏, ဖာရိရှဲတို့! သင်တရားစရပ်၌ပထမဦးဆုံးထိုင်ခုံကိုချစ်ဘို့, နှင့်ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်း.
11:44 သငျသညျမှမင်္ဂလာရှိ၏! သငျသညျသိသာမဟုတ်သင်္ချိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏များအတွက်, ယောက်ျားသတိမထားမိဘဲသူတို့အပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်။ "
11:45 သို့ဖြစ်. ပညတ်တရားအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတဦးတည်း, တုန့်ပြန်, သူ့ကိုကပြောပါတယ်, "အရှင်ဘုရား, ဤအရာတို့ကိုဟု, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်စော်ကားမှုတစ်ခုဆောင်ခဲ့ရမည်။ "
11:46 ဒီတော့သူကပြောသည်: ပညတ္တိကျမ်း၌ "ထိုအမင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့ဆီသို့ကျွမ်းကျင်သူများက! သင်သည်သူတို့မခံနိုင်နေသောထမ်းရွက်နှင့်အတူယောက်ျားကဆင်းချိန်များအတွက်, သင်မူကား, သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်တပင်ကိုမျှသင်၏လက်ချောင်းများ၏နှင့်အတူအလေးချိန်မထိကြပါဘူး.
11:47 သငျသညျမှမင်္ဂလာရှိ၏, ပရောဖက်တို့၏သင်္ချိုင်းတညျဆောကျတဲ့သူ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသတ်သောသင်တို့၏ဘိုးဘေးနေစဉ်!
11:48 ရှင်းနေသည်မှာ, သငျသညျဘိုးဘေးတို့၏အပြုအမူကိုသဘောတူညီကြောင်းသက်သေခံကြသည်, သူတို့သူတို့ကိုသတ်တောင်မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သင်သည်သူတို့၏သင်္ချိုင်းတညျဆောကျ.
11:49 ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း၏, ဘုရားသခင်၏ပညာကပြောပါတယ်: ငါသည်ထိုသူတို့ကိုရန်အနာဂတ္တိကျမ်းနှင့်တမန်တော်ကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်, နှင့်ဤအချို့ကိုသူတို့ကိုသတ်ပစ်သို့မဟုတ်ညှဉျးဆဲကွလိမျ့မညျ,
11:50 လူအပေါင်းတို့သည်အနာဂတ္တိကျမ်း၏အသွေးဒါကြောင့်, ကမ္ဘာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းကကိုသွန်းခဲ့သည့်, ဤလူမြိုးကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုစေခြင်းငှါ,:
11:51 အာဗေလ၏အသွေးထဲကနေ, ပင်ဇာခရိ၏အသွေးမှ, အဘယ်သူအဘို့ယဇ်ပလ္လင်နှင့်သန့်ရှင်းသောအကြားပျောက်ပျက်. ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ: ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးဆက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်!
11:52 သငျသညျမှမင်္ဂလာရှိ၏, ပညတ္တိကျမ်း၌အကျွမ်းကျင်သူများက! သင်သည်ပညာ၏သော့ကိုသိမ်းထားကြပြီ. သင်တို့သည်မဝင်နိုင်ပါဘူး, ဝင်ရောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်သောသူနှင့်ထို, သငျသညျမှတားမြစ်ထားသောကြလိမ့်မည်။ "
11:53 ထိုအခါ, သူထိုသူတို့အားဤအရာများကိုအ ဆို. နေစဉ်, ဖာရိရှဲနှင့်ပညတ္တိကျမ်း၌အကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသူသည်များစွာသောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. မိမိနှုတ်ကိုချုပ်တည်းကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုဖို့စတင်.
11:54 သူ့ကိုကင်းထိုးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အပျေါ၌ဘမ်းဆီးစေခြင်းငှါသူ၏နှုတ်၌တစ်စုံတစ်ခုကိုရှာသောအခါ, သူ့ကိုစွပ်စွဲနိုင်ရန်အတွက်.
အောက်တိုဘာလ 21, 2018